Uganda oo sheegtay inay luminayaan Danaha Ciiddankooda qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM | Baydhabo Online
Uganda oo sheegtay inay luminayaan Danaha Ciiddankooda qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM
Xasan Kaps Fungaro oo ka hoos shaqeeya Wasiirka Difaaca iyo Ammaanka ee dalka Uganda, ayaa si kulul u naqdiyey sababaha ay Dowladaha Midowga Europe xilligan u dhimeen Mushaarka la siiyo Ciiddanka AMISOM.
Mas’uulkaasi oo la hadlay Wrageyska Maalinlaha ee Daily Monitor ee ka soo baxa Kampoala, ayaa tilmaamay in Lacag-dhimistaasi lumin karto Danaha Ciiddanka Uganda ee Hawlgalka AMISOM, isla markaana ay Alshabaab weli xaadir yihiin oo ay hawlgalo ka fuliyaan Somalia iyo dalalka deriska.
“Waa maxay sababta kale ee ay Malageliyayaasha u dhimeen Lacagta AMISOM xilli muhiim oo haatan oo kale ah” ayuu yiri Xasan Kaps Fungaro.
Qaar ka mid ah Mas’uuliyiinta Uganda ayaa rumeysan inay Beesha Caalamka luminayaan xiisaha ay u hayaan Hawlgalka AMISOM oo haatan 9 gu’ jirsaday.
Qeylo-dhaanta Dowladda Uganda ee tallaabadda ay Midowga Europe ku dhimeen Mushaaraadka Ciiddanka AMISOM ayaa noqotay mid ay la anfariirsan yihiin, iyadoo aysan Ciiddanka weli mushaar qaadanin muddo 4 bilood ah.
Go’aanka ay EU-da ku dhimeen 20% Kharajka AMISOM ayaa keenay in Askariga ka tirsan AMISOM mushaarkiisa laga jaray 400 Dollar, iyadoo halkii uu ka qaadan jirey 1,028 Dollar haatan laga dhigay 828 Dollar.
Askarta Uganda ee qeybta ka ah AMISOM waxaa u sii dheer inay Dowladda Uganda ay askari kasta bishiiba ka jarayso mushaarkiisa lacag dhan 200 dollar, taasi oo la midno ah inuu Askariga Ugandese-ka ka tirsan AMISOM mushaarkiisa yahay 628 Dollar.
Tiradda Ciiddanka Uganda ee haatan ku sugan Somalia ayaa la sheegay inay tiradoodu dhan tahay 7,000 oo Askari.